Space Haven - Iyo Kickstarter Blockbuster Spaceship Simulator | Linux Vakapindwa muropa
Iyo vhidhiyo yemitambo indasitiri inoramba ichikura uye inoita saizvozvo zvakare neGNU / Linux chikuva. Muenzaniso weichi ndicho chinyorwa Space denga yakagadzirirwa neBugbyte, iyo imwechete iyo yakagadzira mazita akadai seBatvovoid: Harbinger, uye Battlevoid: Chikamu Chekukombwa. Iye zvino vapa chirongwa ichi chitsva kuti vawane mari pasi peKickstarter crowdfunding chikuva. Mumaawa makumi mana chete kubva pakutanga kwemushandirapamwe wezvemari ivo vanoramba vachikura zvakanyanya uye zvinoita sekunge budiriro inovimbiswa.
Ivo vanogadza yekutanga tarisiro ye $ 40.000 uye yatove vakapfuura $ 100.000 uye kuchine mazuva mashoma asara kusvika kupera kwemushandirapamwe. Kana nhanho yezvipo ikaenderera seizvi, vanogona kuwana yakatokura mari kana zvichibvira. Zvinotaridza kuti vanhu vafarira Space Denga uye kuti vane tarisiro yekuiburitsa isina DRM pamapuratifomu senge GoG kana Steam, uyezve inogona kumhanya pane edu eanodiwa distros kana iwe uchida mitambo yemavhidhiyo ...
Kana iwe uchinetseka kuti chii ichi Chadenga Denga chiri pamusoro, taura icho chiri nezve simulator yechitundumuseremusere Inobatanidza nyaya yakanaka uye kutaura nyaya. Nayo iwe unozogona kubata yako wega spacehip mune simulator inoenderana ne-tile-based maonero emukati, ndiko kuti, iyo yauchakwanisa kuona iyo yemukati kubva kumusoro tarisiro yekugadzirisa zvese mune yakasarudzika maitiro mimwe mitambo yemavhidhiyo yakadai seTycoons.
Uchakwanisa kusarudza pakati pekuve mutengesi wevaranda, pirate, kana iwe uchida kuve nechikepe chekurwisa nekutapa vashandi kubva kune mamwe mapato nekuvatengesa mumusika wepakati, kuvhima vatorwa, kurwa navo, tamba nzvimbo " cop "uye kurwisa galactic matsotsi uye kubatsira vanhuwo zvavo, kana chii chaunoda kuita. Naizvozvo, inokupa rusununguko rwakazara rwekusarudza zvaunoda kuita, asi nguva dzose kubva pakuona kwekufananidza kwechikepe chako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Space Haven - Iyo Kickstarter Blockbuster Spaceship Simulator